AKHRISO-Jadwalka Doorashada Maamulka Galmudug. – Radio Daljir
AKHRISO-Jadwalka Doorashada Maamulka Galmudug.
Abriil 1, 2017 1:23 g 0
Guddiga doorashada Madaxweynaha Galmudug ayaa maanta ku dhawaaqay jadwalka doorashada, waxayna musharixiinta ugu baaqeen in ay isdiiwaan galin karaan laga bilaabo maanta ilaa 5 bishan.
Daawo-Liverpool oo Guul Ka Gaadhey Kulankii Merseyside Derby.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo Balanqaad U Sameeyey Shaqaalaha Dowladda iyo Ciidanka.